Intaba ephakeme kunazo zonke e-UK alikho ngempela omkhulu - 1344 amamitha yokuphakama kwawo. Kodwa iphuzu esiphezulu eBritish Isles. Mhlawumbe yilesi sizathu esenza abantu ibheke phansi kwalo, njengoba besho amaqiniso, ngisho izimoto nge upiyano emahlombe akhe. Kodwa bezintaba abaningi bayawazi yimvelo nokhahlo. elilodwa nje hambisa okungalungile phakathi nesiyaluyalu inkungu neqhwa kungamenza alahlekelwe ukuze abantu eqolo - ekuphileni.
Likuphi Ben Nevis? Lokhu, kuzici zalo, umlando kulezi zindawo, futhi namanye amaqiniso amaningi athakazelisayo kuzoxoxwa ngakho esihlokweni.
Sise ichopho entabeni ezintabeni Grampian (West Highland esifundeni) ukuthi ayingxenye North Highlands yeScotland. Itholakala eduze abadumile izivakashi kanye shopping centre - Fort William. It yasungulwa ngo Fort XVII leminyaka, phakathi 10-lety wayewukuphela endaweni ophucukile kule kunalokho elibuhlungu, angawodwa kulo lonke onqenqemeni emhlabeni. It ogwini Loch Linnhe.
Indawo engalapho Fort UWilliam, incane ngezindinganiso ukuphakama ngamazwe, okubonakala unganakile indlela elula izimbangela intshiseko amashumi ezinkulungwane zezivakashi ukunqoba lo phezulu emangalisayo.
Mayelana uya khona entabeni
Intaba ngokuthi Ben Nevis (noma bin) isetshenziswa cishe kuphela abaqwali wakhe wenyukela. Nokho, ekuqaleni (1883 kuya 1904), kwaba indawo yesayensi ucwaningo Meteorological. Ngalezo zinsuku, phezu Observatory wawusegunjini Meteorological Society of Scotland, wayelapho, futhi ihhotela kwezivakashi. Amanxiwa esele okuvela kuyo le Observatory - omunye ezikhangayo endaweni namuhla. Ngemsebenti we Observatory esake oluthathwa ulwazi mayelana sezulu lonke UK.
travel ejensi Abaningi manje wenze kulo mzila uhlu izinkambo ezinkulu Scottish omangalisayo. Intaba ezokuvakasha embonini yezokuvakasha balelizwe, futhi ngempela emhlabeni, kuthatha 15-20% wemakethe Imininingwane.
Intaba Ben Nevis - ukhetho ephelele imfundamakhwela umgibeli, ngoba, naphezu kwezinkinga elalibhekene ezincane izinhlangano zamazwe ngamazwe amazinga izivakashi ukuphakama, le ntaba e eliphakeme wezwe. Ngaphezu kwalokho, kulo mzila sabekwa kudala ukuba amahhashi, bephethe wezimpahla kuya phezulu, ngakho-ke kuba ezimisiwe kanye kuyingozi kakhulu.
Nokho, akuyona lula njengoba abantu abaningi becabanga efika kuqala. Kunoma ikuphi, zidinga ukuqeqeshwa sina, ukwaziswa okwanele, ukutholakala emashadi, emabalave, njll Izibalo zibonisa ukuthi abantu abangaba ngu-200 eziyinkulungwane. Imizamo ukukhuphuka kungakapheli nonyaka owodwa aziphelele cishe ingxenye yako. Futhi nazi abantu abambalwa, abashona ngonyaka.
Ukunqotshwa kokuqala kakhulu iziqongo iye uzibophezele sezitshalo kusukela Edinburgh uJames Robertson e 1771. Wabahlanganisela lapha amasampula esiyingqayizivele izimila ahlukahlukene, okuyinto abacebile Ben Nevis.
Intaba eScotland ukuvakashela futhi imbongi omkhulu, eyiNgisi, uJohn Keats. Wayeqombola entabeni 1818. Kamuva kwalotshwa ukuthi Umqansa entabeni - cishe iyafana umqansa kuya 10 St kukaPawulu ngaphandle izitebhisi ukhululekile.
Ukuze enyakatho ubudala ziphuzo zazihluzwa isitshalo (eyasungulwa ngo-1825), okuyinto kuveza nogologo ethandwa "Ben Nevis" (lwemithombo olulodwa) kwentaba itholakala e Fort William.
Khona-ke, sibonga ukutadisha ngokucophelela izazi zokuma komhlaba sezwe yangokwesiko ngo-1847 inkampani iye yaqinisekisa ukuthi kule ntaba yilona eliphezulu ukuwedlula wonke e yaseBrithani.
Ngo-1894, e Fort William wakha ujantshi. Futhi emhlabeni ngesikhathi esifanayo, amanye amaphrojekthi ukwakhiwa sesitimela igiya, okuholela phezulu. Nokho, akekho kubo esikhathini esizayo awuzange igcwaliseke.
Mayelana nomsuka kwegama
Kuyini Ben Nevis? EScotland, izakhamuzi zendawo, futhi eziningi izivakashi zalezi zindawo, entabeni ebizwa ngokuthi Ben nje, njengoba umngane. Kodwa, eqinisweni, egameni le kancane ukuba nobungane.
Senzeka eyodwa version of the Gaelic BeinnNibheis, lapho izwi lokuqala elisho "intaba", owesibili -. "Okubi," "babi,"
Kunenye, inguqulo romantic more. Gore sasibizwa beinnneamh-bhathais, okuyinto elihunyushwe ngokuthi "esibhakabhakeni entabeni" noma "entabeni nekhanda lakhe zisemafwini."
Ekugcineni, kancane amaqiniso ezithakazelisayo
Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi entwasahlobo ka 2006 upiyano endala kakhulu kwatholakala phezulu ngesikhathi udoti. Leli thuluzi uvusiwe kuya Umgawuli Scottish Kenni Campbell (ngokusho kwakhe) iminyaka engu-35 edlule. Isizathu sokuba anjalo isenzo Lokuhehako lemali epherishi lapho umzimba salandelwa upiyano. Kenni namanje ebusheni bakhe udonse kuya phezulu entabeni futhi egejeni, kanye Keg likabhiya.
Le ntaba Ben Nevis futhi Motorcyclists evame ukubuzwa kanye ahamba ngamabhayisekili. 1911 kwaphawulwa yokuthi kwaba ukukhuphuka Mount ngoba Ford imoto (inkampani yokukhangisa). Lokhu kuyanda kwenziwa ngokusebenzisa kwamapulangwe izindophi wathatha ingqikithi kwezinsuku ezimbalwa.
Makeyev Maria. Biography empilweni yakho.
Simo Christmas iqembu yenkampani